Isifo sikashukela sikashukela - izimpawu, ukunakekelwa okuphuthumayo, imiphumela > Ukwelashwa nokuvimbela
Izimpawu zesifo sikashukela sikashukela nemiphumela
Enye yezifo zesimanje ezikhohlisayo isifo sikashukela. Abaningi abazi nokuthi, ngenxa yokuntuleka kokubonakaliswa kwezimpawu, ukuthi banesifo sikashukela. Funda: Izimpawu eziphambili zesifo sikashukela - kufanele uziqaphele? Ngakolunye uhlangothi, ukushoda kwe-insulin kungaholela ekuphazamisekeni okubi kakhulu futhi, uma kungekho kwelashwa okufanele, kusongela impilo. Izinkinga ezinkulu zesifo sikashukela yi-coma. Yiziphi izinhlobo zesifo sikashukela esaziwayo, futhi ungasinikeza kanjani usizo lokuqala esigulini esikulesi simo?
Isifo sikashukela sesifo sikashukela - izimbangela eziphambili, izinhlobo zesifo sikashukela
Kuzo zonke izinkinga zesifo sikashukela, isimo esibuhlungu esinjengokuma kwesifo sikashukela, ezimweni eziningi, siyaphenduka. Ngokwenkolelo ethandwayo, ikoma lesifo sikashukela yisimo se-hyperglycemia. Lokho wukuthi, ukweqile okubukhali koshukela wegazi. Eqinisweni, Isifo sikashukela esinesifo sikashukela singaba izinhlobo ezahlukene:
I-Hyperosmolar noma i-hyperglycemic coma
Imbangela yokuba nesifo sikashukela sikashukela kungaba ukukhuphuka okubukhali kwenani likashukela egazini, ukwelashwa okungafanele kwesifo sikashukela ngisho ne-insulin ethe xaxa, lapho ushukela wehla khona ngokujwayelekile.
Izimpawu ze-hypoglycemic coma, usizo lokuqala lwe-hypoglycemic coma
Izimo ze-Hypoglycemic zimpawu, ikakhulukazi, sohlobo 1 sikashukela, yize zenzeka ezigulini ezidla izidakamizwa ezibhebheni. Njengomthetho, ukuthuthukiswa kwesimo kwandulelwa ukwanda okubukhali kwenani le-insulin egazini. Ingozi ye-hypoglycemic coma ikukuhlulwa (okungenakuphikwa) kohlelo lwezinzwa nobuchopho.
I-Hypoglycemic coma - izimpawu
At ukuhlaselwa ngamaphaphu kuphawulwe:
Ukwanda kokuphazamiseka kwemizwa.
Ngalezi zimpawu, kubalulekile masinyane yeka ukuhlasela ukuze ugweme ukuthuthukiswa kwesimo esihle, izimpawu zomuntu ngazo
Ukuthuthumela, kuphenduka ngokushesha kube yiminyakazo.
Umuzwa ojulile wendlala.
Ukuphazamiseka kokuphazamiseka kwemizwa.
Kwesinye isikhathi kulesi sigaba Ukuziphatha kweziguli kucishe kungalawuleki - kuze kube ulaka, futhi ukukhuphuka kokufikelwa imbala kuvimbela ngisho nokwanda kwemilenze yesiguli. Ngenxa yalokho, isiguli siphulukana nokuzilawula esikhaleni, futhi ukulahleka kwengqondo kwenzeka. Okufanele ukwenze
Usizo lokuqala lwe-hypoglycemic coma
Ngezimpawu ezithambile isiguli kufanele sinikeze ngokushesha izingcezu ezimbalwa zoshukela, cishe ama-100 g amakhukhi noma izipuni ezi-2 zikajamu (uju). Kuhle ukukhumbula ukuthi ngesifo sikashukela esincike ku-insulin kufanele njalo ube namaswidi “esifubeni”.
Thela itiye elifudumele emlonyeni wesiguli (ingilazi / nezinkezo kashukela) uma ekwazi ukugwinya.
Ngaphambi kokufakwa kwetiye, kubalulekile ukufaka i-retainer phakathi kwamazinyo - lokhu kuzosiza ukugwema ukucindezelwa okubukhali kwemihlathi.
Ngokufanelekile, izinga lokuthuthuka, nikeza isiguli ukudla okunotha kwama-carbohydrate (izithelo, izitsha zikafulawa namabele).
Ukuze ugweme ukuhlaselwa okwesibili, yehlisa umthamo we-insulin ngamayunithi angama-4-8 ngakusasa ekuseni.
Ngemuva kokuqeda ukusabela kwe-hypoglycemic, bonana nodokotela.
Uma ukhula lukhula ngokulahlekelwa ukwazibese kulandela:
Ngenisa i-40-80 ml ye-glucose ngaphakathi.
Uphuthume ushayele i-ambulensi.
Usizo lokuqala lwe-hyperosmolar coma
Beka isiguli kahle.
Yethula ukuhambisa nokukhipha ulimi oluhoxisiwe.
Yenza ukulungiswa kwengcindezi.
Yethula ngaphakathi kwe-10-20 ml ye-glucose (isixazululo esingu-40%).
Ukudakwa kakhulu - shayela i-ambulensi ngokushesha.
Isifo sikashukela sezingane nakubantu abadala: izimbangela nemiphumela
Isifo sikashukela i-mellitus singokweqembu lezifo lapho kukhuphuka khona ushukela egazini. Lesi simo kungaholela ekutheni ukuguga ngaphambi kwesikhathi komzimba kanye nomonakalo cishe kuzo zonke izitho nezinhlelo zawo.
Izazi ezingama-Endocrinologists ziyaqiniseka ukuthi uma kuthathwa izinyathelo zokuvimbela futhi kuthathwa ukwelashwa okunekhono, ezimweni eziningi kungenzeka ukuvimbele noma ngisho ukuvimba ukuqala kwe-coma kushukela. Ngempela, ezimweni eziningi, ubunzima obunjalo buvela ngokwelashwa okungakenzeki, ukuzithiba okwanele nokungahambisani nokudla.
Ngenxa yalokhu, isimo se-hypoglycemic siyakhula, okuholela ekuthuthukisweni kwe-coma ku-mellitus yesifo sikashukela. Kwesinye isikhathi ukuntuleka kokukhululeka okufika ngesikhathi kwento enjalo kungakubangela nokufa.
Kuyini ukukhohlisa kwesifo sikashukela futhi yini izimbangela nezinhlobo zazo?
Ukuchazwa komqondo kunesifo sikashukela - kusho isimo lapho umuntu onesifo sikashukela elahlekelwa ukwazi lapho kunokushoda noma ngokweqile kwe-glucose egazini. Uma ukulesi simo isiguli singanikezwa ukunakekelwa okuphuthumayo, khona-ke konke kungabulala.
Izimbangela ezihola phambili zesifo sikashukela ukukhuphuka okusheshayo kokuxineka kweglucose, okubangelwa ukufihlwa okunganele kwe-insulin yi-pancreas, ukuntuleka kokuzithiba, ukwelashwa okungafundile nabanye.
Ngaphandle kwe-insulin eyanele, umzimba awukwazi ukucubungula ushukela ngenxa yalokho okungaphenduki amandla. Ukushoda okunjalo kuholela eqinisweni lokuthi isibindi siqala ukukhiqiza ngokuzimele ushukela. Ngokuphikisana nalesi sizinda, kunokuthuthuka okusebenzayo kwemizimba ye-ketone.
Ngakho-ke, uma ushukela unqwabelana egazini ngokushesha kunemizimba ye-ketone, khona-ke umuntu ulahlekelwa ukuqaphela bese eba nethonya lesifo sikashukela. Uma ukugcotshwa koshukela kukhuphuka kanye nokuqukethwe kwezidumbu ze-ketone, isiguli singawela enkingeni yeketoacidotic. Kepha kunezinye izinhlobo zezimo ezinjalo okufanele zibhekwe ngemininingwane eminingi.
Ngokuvamile, lezi zinhlobo zokwehla kwesifo sikashukela ziyahlukaniswa:
I-Hypoglycemic coma - kungenzeka lapho izinga loshukela emgodini wegazi lihle ngokungazelele. Lesi simo sizohlala isikhathi esingakanani ngeke kushiwo, ngoba okuningi kuncike kubukhali be-hypoglycemia kanye nempilo yesiguli. Lesi simo sisengozini yokuba nesifo sikashukela seqa ukudla noma labo abangalandeli umthamo we-insulin. I-Hypoglycemia ivela futhi ngemuva kokusebenzisa ngokweqile noma kabi ngokweqile.
Uhlobo lwesibili - i-hyperosmolar coma kwenzeka njengengxaki yesifo sikashukela sohlobo 2, esibangela ukuntuleka kwamanzi noshukela wegazi ngokweqile. Ukuqalwa kwayo kwenzeka ngezinga le-glucose elingaphezu kwama-600 mg / l.
Imvamisa, i-hyperglycemia eyeqile inxephezelwa izinso, ezisusa ushukela omningi ngomchamo. Kulokhu, isizathu sokukhula komqondo ukuthi ngesikhathi sokukhipha amanzi emzimbeni okwenziwe izinso, umzimba uphoqelelwa ukuba wonge amanzi, okungadala i-hyperglycemia enzima.
I-Hyperosmolar s. I-diabetesicum (Latin) iba kaningi kakhulukazi kune-hyperglycemia. Ngokuyisisekelo, ukubukeka kwayo kutholakala njengohlobo 2 sikashukela ezigulini esezikhulile.
I-ketoacidotic diabetesic coma iba nesifo sikashukela sohlobo 1. Lolu hlobo lwe-coma lungabonakala lapho ama-ketones (ama-acetone acids) ayenqwabelana emzimbeni. Kungamikhiqizo yemikhiqizo yama-metabolism enamafutha ngenxa yokuphelelwa ngamandla kwe-insulin ye-hormone.
I-Hyperlactacidemic coma kusifo sikashukela kwenzeka kakhulu esikhathini esinqabile. Lokhu kuhlukahluka kweziguli esezikhulile ezinesibindi sokulimala, izinso nenhliziyo ukusebenza.
Izizathu zokuthuthuka kwalolu hlobo lukashukela sikashukela yimfundo ekhulayo nokusetshenziswa kabi kwe-hypoxia ne-lactate. Ngakho-ke, umzimba unobuthi nge-lactic acid, eqoqwe ngokweqile (2-4 mmol / l). Konke lokhu kuholela ekuphulweni kwebhalansi ye-lactate-pyruvate kanye nokuvela kwe-metabolic acidosis nomehluko obalulekile we-anionic.
Ukukhohlisa okuvela kuhlobo 2 sikashukela sohlobo 1 kuyinkinga evame kakhulu futhi eyingozi kumuntu omdala oseneminyaka engama-30 ubudala. Kepha le nto iyingozi ikakhulukazi kwiziguli ezincane.
Isifo sikashukela ezinganeni sikashukela ezinganeni zivame ukuba nefomu lesifo esincike ku-insulin esigcina iminyaka eminingi. Amahlaya kashukela ezinsaneni ngokuvamile avela esikoleni sokuqala noma esikoleni, kwesinye isikhathi esifubeni.
Ngaphezu kwalokho, ngaphansi kweminyaka emithathu, izimo ezinjalo zenzeka kaningi kakhulu kunabantu abadala.
Isifo sikashukela sikashukela - izimpawu, ukunakekelwa okuphuthumayo, imiphumela
Isifo sikashukela sesifo sikashukela yisimo emzimbeni womuntu onesifo sikashukela, esibonakaliswa ukuphazamiseka okukhulu kwe-metabolic. Kungenzeka ngenxa yokwehla okunamandla noma ukwanda kwamazinga kashukela egazini. Ukuhlakulela ukuqina kwesifo sikashukela kudinga ukunakekelwa ngokushesha kwezokwelapha. Endabeni yokungatholakali isikhathi eside, izinkinga ezinkulu zingavela kumphumela obulalayo.
Kunezinhlobonhlobo eziningana zesifo sikashukela esinesifo sikashukela, ngasinye sazo esidinga indlela eyodwa yokwelashwa. Zibangelwa yizizathu ezahlukahlukene, zibe nezinqubo ezahlukahlukene zokuthuthuka.
Ochwepheshe bahlukanisa lezi zinhlobo ezilandelayo:
I-Ketoacidotic coma - ikhula kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 1. Kubangelwa ukukhishwa kwenani elikhulu lama-ketones, okwenzeka emzimbeni ngenxa yokucutshungulwa kwamafutha acid. Ngenxa yokugcwala kwenqwaba yalezi zinto, umuntu uwela ekhaveni ketoacidotic.
I-Hyperosmolar coma - ikhula kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2. Kubangelwa ukuphuma komzimba okukhulu. Amazinga kashukela egazini angafinyelela ngaphezu kwama-30 mmol / l, ama-ketones awekho.
I-Hypoglycemic coma - ikhula kubantu abajova umthamo ongafanele we-insulin noma abanganamatheli ekudleni. Nge-hypoglycemic coma, ushukela egazini lomuntu ufinyelela ku-2,5 mmol / L bese uphansi.
I-Lactic acidosis coma luhlobo olungandile lukashukela onesifo sikashukela. Ikhula ngokumelene nesizinda se-anaerobic glycolysis, okuholela ekushintsheni kwebhalansi ye-lactate-pyruvate.
Noma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela esiba khona ngenxa yokwanda ngokweqile noma ukuntuleka kwe-insulin, okubangela ukusetshenziswa ngokushesha kwamafutha acid. Konke lokhu kuholela ekwakhekeni kwemikhiqizo engaphansi kwe-oxidized. Banciphisa ukuhlanganiswa kwamaminerali egazini, okunciphisa kakhulu i-acidity yayo. Lokhu kuholela ku-oxidation yegazi, noma i-acidosis.
I-ketosis ebangela ubunzima obukhulu ekusebenzeni kwezitho zangaphakathi ku-coma yesifo sikashukela. Isistimu yezinzwa ihlushwa kakhulu yilokhu okwenzekayo.
Isifo sikashukela esinesifo sikashukela sibonisa ngokuthuthuka okusheshayo, kepha okuhleliwe. Izimpawu zokuqala zokuthi umuntu uzokwehlelwa ubuthongo maduze zingabonakala ngosuku noma ngaphezulu. Uma ubona noma yiziphi izimpawu zesimo sokufenda, zama ukubonana nodokotela wakho ngaso leso sikhathi. I-Hyperglycemia ibonakala ngokwanda okusheshayo kokuhlushwa ushukela kaningana. I-ketoacidotic coma ingaqashelwa isicanucanu nokuhlanza, ukukhathala, ukuchama kaningi, izinhlungu esiswini nokuqina. Futhi, isiguli sinephunga elibi elingathandeki le-acetone ephuma emlonyeni. Angakhononda ngokoma, ukukhothama kaningi, ukulahleka kwemizwa.
Ngokuthuthukiswa kwe-hypoglycemia kubantu, ukugcwala koshukela egazini kwehla kakhulu. Kulesi simo, le nkomba ifinyelela uphawu olungaphansi kuka-2,5 mmol / L. Ukuqaphela ukuqala okuzayo kwe-hypoglycemic coma kulula kakhulu, umuntu amahora ambalwa ngaphambi kokuthi iqale ukukhononda ngomzwelo ongenangqondo wokukhathazeka nokwesaba, ukukhuphuka kokujuluka, ukubanda nokuqhaqhazela, ukozela nobuthakathaka, ukuguquguquka kwemizwelo nobuthakathaka. Konke lokhu kuxhaswe ngokuxoshwa okukhohlisayo kanye nokulahlekelwa ukwazi, uma umuntu engatholi usizo lwezokwelashwa olufika ngesikhathi. Lesi simo sandulelwa ngu:
Ukwehla kwesifiso sokudla noma okuphelele,
Ubuhlungu bekhanda nesiyezi,
Ukuqunjelwa noma isifo sohudo.
Uma kungekho sizo esifike ngesikhathi somuntu onesifo sikashukela, umuntu angabhekana nemiphumela emibi kakhulu. Ngokuthuthukiswa kwalesi simo, kubaluleke kakhulu ukubheka ukushisa komzimba. Kubaluleke kakhulu ukuthi ayinqabe - kungcono ukuthi inyuke kancane. Isikhumba kufanele some futhi sifudumele. Ukungazinaki izinkomba zokuqala zokwehla kwesifo sikashukela kuholela ekuqalekeni kokuphamba. Umuntu, kunjengokungathi kunjalo, usefuduka ezweni elijwayelekile; akaqondi ukuthi ungubani nokuthi ukuphi.
Odokotela baphawula ukuthi kulula kakhulu kubantu abangakulungele ukubona ukuthi banesifo sikashukela ngokuncipha ngokushesha komfutho wegazi, ukushaya ngamandla nokuthambisa izindonga zamehlo. Ukumisa le nqubo, kufanele ushayele i-ambulensi ngokushesha. Udokotela ofanelekayo ofanele kuphela ozokwazi ukwenza imisebenzi efanele yokwelapha.
Uma ubona izimpawu zokuqala zokwehla kwesifo sikashukela kumuntu, zama ukumnikeza usizo lokuqala. Kufaka imisebenzi elandelayo:
Beka isiguli esiswini sakhe noma eceleni kwakhe,
Susa izingubo zonke zokuthambisa kuye,
Khipha imigwaqo yomoya yokuhlanza ukuze umuntu angazweli,
Qala ukuphuza itiye elincanyana noma isiraphu,
Ngaphambi kokuthi kufike i-ambulensi, qapha umoya wokuphefumula komuntu.
Uma uzazi izimpawu zokuwohloka kwesifo sikashukela, ungonga kalula impilo yomuntu. Ungazinikeza nosizo lokuqala ngokwakho, okuzonciphisa ubungozi bemiphumela emibi. Ukwelashwa kwezinhlobo ezahlukene zesifo sikashukela kuhluke ngokuphelele, ngakho-ke awukwazi ukwenza eminye imisebenzi.
Akunakwenzeka ukuthola i-coma yesifo sikashukela ngokuhlolwa okubonakalayo kuphela. Kulokhu, isiguli siya ochungechungeni lokuhlolwa kwelebhu, okuyo kuhlolwa igazi okujwayelekile, okunquma izinga le-glucose, kubaluleke kakhulu. Ngaphezu kwakhe, ukuhlolwa kwegazi okune-biochemical, i-urinalysis nayo iyenziwa.
Noma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela esihambisana nokukhuphuka kokuxineka koshukela egazini ngenhla kuka-33 mmol / L. Ukuphela kwento yi-hypoglycemic, ngenxa yokuthi ushukela wehla ngaphansi kuka-2,5 mmol / L. Lapho i-hyperglycemic, umuntu ngeke abhekane nezimpawu ezihlukile. I-ketoacidotic coma ingaqapheleka ngokubonakala kwezidumbu ze-ketone emchameni, kanye ne-hyperosmolar coma ngokwanda kwe-plasma osmolarity. I-lactacidemic coma itholakala ngokwanda kokuxineka kwe-lactic acid egazini.
Okubaluleke kakhulu ekwelapheni isifo sikashukela kungabizwa ngokuthi isikhathi sokunakekelwa. Uma umuntu engathathi mithi isikhathi eside, ugijimisa ubungozi bezinkinga ezinkulu kakhulu, njengokuvuvukala kobuchopho noma amaphaphu, ukushaywa unhlangothi, ukushaya kwenhliziyo, isifo sokuqaqanjelwa yisifo, ukuqaqanjelwa kwe-renal noma ukuphefumula, nabanye abaningi. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ngokushesha nje lapho udokotela eqinisekise ukuthi utholile, isiguli siqala ukunikeza ukunakekelwa kwempilo.
Uma umuntu ene-ketone coma, odokotela benza konke okusemandleni ukubuyisa izimpawu ezibalulekile zomzimba: umfutho wegazi, ukuphefumula, ukushaya kwenhliziyo. Futhi, isiguli kufanele silethwe. Udokotela uvala ukuhlaselwa ngesixazululo se-glucose ne-sodium chloride, ebuyisela ukulingana kukasawoti wamanzi.
Ukwelashwa kwe-lactic acidemic coma kuqukethe ukufeza izinyathelo ezifanayo ne-ketoacidotic. Kodwa-ke, kulokhu, ukubuyiselwa kwemali esele ye-acid kubaluleke kakhulu ngokwelashwa.Umuntu esibhedlela ujojwa ngenani elithile le-glucose ne-insulin, lapho izimpawu ezibalulekile zibuyela kokujwayelekile, ukwelashwa okunezimpawu kwenziwa.
Uma isiguli esinohlobo lwe-2 yesifo sikashukela noma abantu abasondelene naye beqala ukubona izimpawu zokufika kwesifo se-hypoglycemic, khona-ke kungenzeka ngokuphelele ukuvimba ukwanda kwesimo esinjalo ngokwabo. Ungamisa ukuhlaselwa ngokudla ukudla kwe-carbohydrate: ucezu oluncane ushukela, ukubhaka ibhotela, isipuni sejamu noma itiye elimnandi njalo. Ngemuva kwalokho, udinga ukuthatha indawo enhle futhi ulinde impilo engcono. Uma kungalandelanga, shayela i-ambulensi.
Lapho abanesifo sikashukela behlakulela i-hypoglycemic coma ebangelwa ukusebenzisa i-insulin ngokweqile, abantu kufanele basebenzise ama-carbohydrate amaningi ahamba kancane. Ngalezi zinhloso, kunconyelwa ukusebenzisa iphalishi yommbila. Ngezindlela ezibucayi zesilonda, ngeke kwenzeke ukuyeka i-hypoglycemic coma ngale ndlela. Kulokhu, uchwepheshe uphatha isisombululo se-glucagon noma i-glucose ngaphakathi.
Imihlahlandlela elandelayo kufanele ilandelwe ukusiza ukunciphisa ingozi yokuba nesifo sikashukela:
Thatha izivivinyo njalo,
Landela izincomo zikadokotela wakho,
Yidla kahle futhi njalo,
Njalo qaphela ushukela wegazi lakho
Hola indlela yokuphila esebenzayo
Yekani imikhuba emibi
Yehlisa inani lokuxineka nokukhathazeka empilweni yakho.
Ukushintshwa kwe-pathological ekugxilweni kwe-glucose egazini kuholela njalo ekuthuthukisweni kwezinkinga ezinkulu emzimbeni. Ubulukhuni babo buya ngejubane lokunakekelwa kwempilo. Ngenxa yokwanda komchamo okhiqizwa izinso, umuntu uba nokukhipha amanzi emzimbeni, okuthi kwande kakhulu ngemuva kokuphuza uketshezi. Lokhu kuholela ekunciphiseni kwethamo legazi, elehlisa umfutho wegazi. Lokhu kuba imbangela yokuphazamiseka kokujikeleza kuzo zonke izitho nezicubu, kodwa-ke, lo mkhuba uyingozi kakhulu ebuchosheni.
Ngokubambisana nomchamo, ama-electrolyte adingekayo ekusebenzeni okujwayelekile asuswa emzimbeni.
Isifo sikashukela esidabukisayo ukuphambuka okukhulu ekusebenzeni komzimba. Cishe njalo kushiya imiphumela ekusebenzeni komzimba. Kodwa-ke, ubukhulu besilonda selokhu buya ngokuthi ukunakekelwa kwezokwelapha kwakufika ngasikhathi esingakanani. Ngokwazisa ngokushesha kwezidakamizwa, ukuphambuka okungathí sina kungagwenywa. Endabeni yokulibaziseka isikhathi eside, umuntu angagcina ebulawe. Izibalo zikhombisa ukuthi ukufa kwenzeka ngamaphesenti ayi-10 abantu abaphethwe yisifo sikashukela.
Isifo sikashukela sikashukela siyinkinga eyenzeka ngesifo sikashukela mellitus. Isimo sikhula ngejubane lombani. Ukwehluleka ukuthatha izinyathelo eziphuthumayo kungaholela ezinkingeni ezinkulu zempilo ngisho nokufa. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi wonke umuntu onesifo sikashukela azi ukuthi yiziphi izimpawu nezimpawu ezandulele ikhehla likashukela nokuthi yiziphi izindlela okufanele zithathwe lapho kutholakele.
Kunezinhlobo ezi-4 zokuqaqanjiswa kukashukela: ketoacidotic, hyperosmolar, hyperlactacidemic ne-hypoglycemic.
Thayipha isifo sikashukela sokuqala esivame ukwanda ketoacidotic coma. Kwenzeka ngokumelene nesizinda sokuntuleka kwe-insulin nokukhuphuka okubukhali koshukela wegazi. Ngenxa yalokhu, ukuthathwa kweglucose kuyancishiswa, imetabolism iyaphazamiseka, ukungasebenzi kahle kwezinhlelo zonke kanye nezinye izitho ezithile kwenzeka. I-ketoacidotic coma iba phakathi kwezinsuku ezi-1-2 (kwesinye isikhathi ngokushesha). Izinga likashukela lapho ikhehla livela khona lingafinyelela ku-19- 33 mmol / l nangaphezulu. Uma kungekho zinyathelo ezifika ngesikhathi, umuntu onesifo sikashukela angadinwa kakhulu.
Uhlobo 2 sikashukela esivame ukubangelwa i-hyperosmolar coma. Lolu hlobo luphinde lube khona ngenxa yokuntuleka kwe-insulin. Kuhambisana nokuphelelwa ngamandla komzimba kanye nokuqongelela okwandayo kwe-sodium, glucose ne-urea ions egazini. Ngaphansi kwethonya le-hyperosmolarity, ukuphazamiseka okungathi sína kwenzeka emzimbeni womuntu, okuvame ukuhambisana nokulahlekelwa ukwazi.
Izinhlobo ezimbili ezisele zesifo sikashukela zijwayelekile ngokufanayo kulezi zinhlobo zombili zezifo. I-Hyperlactacidemic coma iba nokwanda kwe-lactic acid egazini. Isizathu ukuntuleka kwe-insulin. Njengomphumela wokukhula komthambo, ukwakheka kwamakhemikhali kwegazi kuyashintsha, isimo sezempilo siba sibi kakhulu, futhi ukulahleka kwengqondo kungenzeka.
Izinhlobo ezifakiwe ezifakiwe yi-hyperglycemic. Zenzeka ngokumelene nesizinda sokunyuka okubukhali koshukela wegazi. Inqubo yokubuyela emuva iholela entuthukweni I-hypoglycemic coma. Ukuxazulula kuqala ngokuncipha kwe-glucose yegazi kuye ezingeni elibucayi. Lokhu kuholela endlala amandla ebuchosheni. Ngo-hypoglycemic coma, ushukela wegazi wehla ufike ku-3.33-2.77 mmol / litre. Uma ungazinaki izimpawu ezivelayo, izinga likashukela lingase lehle liye ku-2.77-1.66 mmol / lit. Kulokhu, kuzo zonke izimpawu izimpawu ze-hypoglycemia. Isiguli esinezinkomba ezinjalo kufanele siye esibhedlela siyolashwa. Amanani ashukela abucayi - 1.66-1.38 mmol / litre - kuholela ekulahlekelweni kwemizwa. Usizo oluphuthumayo kuphela lochwepheshe olungasindisa umuntu.
Uhlobo ngalunye lwesifo sikashukela esandulelwa ngaphambi kwezimbangela zalo.
Ukutheleleka kwe-Hyperglycemic kubangelwa ukuntula kwe-insulin, okuholela ekwandeni okusheshayo kweglucose yegazi. Imvamisa, izici ezilandelayo zingaholela ekusweleni kwe-insulin:
ukulimala nokungenelela kokuhlinzwa,
ukusetshenziswa isikhathi eside kwama-glucocorticoids noma ama-diuretics,
ukusebenza ngokweqile komzimba kanye nezimo ezicindezelayo,
ukwehluleka ukudla, ukuzila ukudla isikhathi eside, ukuphuza utshwala.
Imbangela ye-ketoacidotic coma inobuthi ngemizimba ye-ketone ne-acetone. Ukushoda kwe-insulin kubangela ukuba umzimba uqale ukubuyisa amandla kumaprotheni namafutha, hhayi kusuka eglucose. Ngokukhiqizwa kwamandla okungafanele, ama-ketones ne-acetone acetic acid akhiwa ngamanani amakhulu. Ukweqiwa kwabo ngokweqile kudonsa izinqolobane ze-alkaline futhi kubangele i-ketoacidosis (i-metabolism enzima ye-metabolic) nokuphazamiseka ku-metabolic ye-electrolyte.
Ukuqhubekela phambili kwe-hyperosmolar coma kungabangelwa ukusetshenziswa ngokweqile komzimba wokugaya, ukuhudula kanye nokuhlanza kwanoma isiphi i-etymology, isimo sezulu esishisayo kanye nokushisa komoya okuphezulu, i-peritoneal dialysis noma i-hemodialysis, ukopha isikhathi eside.
I-Lactacidemic coma ingadala ukuhluleka kwenhliziyo noma ukuphefumula. I-coma kwesinye isikhathi iba ne-asthma ye-bronchial, i-bronchitis, ukwehluleka kokujikeleza kwegazi, i-pathologies yenhliziyo. Imvamisa imbangela yokukhohlisa ukuvuvukala nokutheleleka, isifo sesibindi noma sezinso. Iziguli ezihlushwa uphuzo oludakayo nazo zisengozini.
Imbangela ye-hypoglycemic coma ilele ekushoneni kashukela wegazi. Lesi simo singadala i-overdose ye-insulin noma yokwelapha ushukela okwehlisa ushukela. Imvamisa hypoglycemia yenzeka ngenxa yokuthi umuntu onesifo sikashukela ngemuva kokuthatha i-insulin waphuthelwa ukudla noma wadla ama-carbohydrate anganele. Kwesinye isikhathi amazinga kashukela aphansi avela ngokuhambisana nesizinda sokuncipha kokusebenza kwe-adrenal noma ikhono le-insulin-lokuvimbela isibindi. Okunye isizathu se-hypoglycemic coma kungukusebenza ngokomzimba okukhulu.
Uhlobo ngalunye lukashukela onesifo sikashukela lunezici zalo. Yize izimpawu zivame ukufana, ukuxilongwa kokugcina kungenziwa kuphela ngemuva kokuhlolwa kwelebhu.
I-Hyperglycemic coma ihambisana nezimpawu ezivezwe ngezansi.
Ubuthakathaka obujwayelekile, obuvame ukuhambisana nobuhlungu bekhanda.
Umdlandla ovuthayo, olandelwa ukudakwa.
Isicanucanu (kwezinye izimo sihambisana nokuhlanza).
Ezinye zezimpawu ezengeziwe ze-hyperosmolar coma ukuqina komzimba, ukukhubazeka komsebenzi wokukhuluma kanye ne-areflexia (isibonakaliso sokwehla komqondo).
Izimpawu zokuqina ketoacidotic zivela kancane. Kulokhu, odokotela banethuba ngaphambi kwenhlekelele yokuthola ukwelashwa okugcwele. Kodwa-ke, uma umuntu onesifo sikashukela engazinaki izimpawu zokuqala, khona-ke ukwanda kwesimo, okubonakaliswa wukuphefumula okujulile nokuzwakalayo, izinhlungu ezibukhali esiswini ngaphandle kokuthola indawo ethile, ukubabaza, kungenzeka. Isibonakaliso esibonakalayo se-ketoacidotic coma ukuhogela kwe-acetone ephuma emlonyeni.
I-Lactacidemic coma, ngokungafani nezinhlobo zangaphambilini, ithuthuka ngokushesha okukhulu futhi ibonakala ngendlela yokuwa kwemithambo yegazi. Ezimpawu ezibonakalayo zalokhu kudabukisa, umuntu angabona ubuthakathaka obukhula ngokushesha, i-anorexia, i-delirium, nokuqwashisa ngamehlo.
Izimpawu ze-hypoglycemic coma zihlukile kancane kwizimpawu ze-hyperglycemic coma. Lokhu kufaka phakathi ukwesaba, ukukhathazeka, ukujuluka okungaphezulu, ukuthuthumela kanye nomuzwa onamandla wendlala. Uma ungathathi izinyathelo ezifika ngesikhathi, isimo jikelele somzimba singaba sibi kakhulu: ubuthakathaka, ukuvela. I-apogee ye-hypoglycemic coma ukulahlekelwa ukwazi.
Lapho kukhona isifo sikashukela ezinganeni, izimbangela zangaphambi kokubekeka ikhanda, isicanucanu nokuhlanza, ukulahleka kwesifiso sokudla (kuze kube ukungabikho kwayo okuphelele), ukomela okukhulu, ukozela. Ukuchama kaningi, ulimi nezindebe ezomile nazo kungenzeka.
Ukwazi izimpawu zokuwohloka kwesifo sikashukela kuzosiza ukumisa ukuqhubeka kwawo ngesikhathi. Esibonakaliso sokuqala senkinga, i-ambulensi kufanele ibizwe ngokushesha. Ngaphambi kokufika kodokotela, umuntu onesifo sikashukela kufanele anikezwe usizo oluphuthumayo. Okokuqala, beka isiguli eceleni noma esiswini sakhe. Landela ulimi, uqiniseke ukuthi alukubi futhi akwenzi ukuphefumula kube nzima. Vumela umoya omusha ungene egumbini likashukela.
Ngaphezu kwalokho, ezinhlotsheni ezahlukahlukene zesifo sikashukela, amaqhinga wokunakekela ahlukile kancane. Ngohlobo lwe-hyperosmolar, bopha bese ufudumeza imilenze yesiguli. Hlola ukugxila kwe-glucose nge-glucometer, vivinya umchamo ngebhande lokuvivinya le-ketone. Asikho esinye isenzo esidingekayo. Lindela i-ambulensi ukuthi ifike.
Izinhlobo ze-ketoacidotic ne-lactacidemic yekhesa zidinga ukungenelela okusheshayo kochwepheshe. Kulokhu, ngeke kusebenze ukuvimba ukuthuthukiswa kwesiqu ngemizamo yokuzimela. Ukuphela kwento ongayenza ukuqapha ukuphefumula nokushaya kwenhliziyo kwesiguli aze afike udokotela.
Nge-hypoglycemic coma, kubalulekile ukuhlinzeka ukunakekelwa okuphuthumayo ngokushesha okukhulu. Imvamisa ifomu elithambile alihambisani nokulahlekelwa ukwazi. Kulokhu, isiguli singazithatha ngokuzimela izinyathelo ezidingekayo. Ezimpawu zokuqala zokuwohloka okusondelayo, udinga ukudla kancane ama-carbohydrate (isinkwa, i-pasta), uphuze itiye noshukela noma uncibilishe amaphilisi we-4-5 kashukela. I-hypoglycemia enkulu ibangela ukudangala okujulile. Ngale ntuthuko yemicimbi, isisulu asikwazi ukwenza ngaphandle kosizo lwangaphandle. Uma isiguli sine-reflex yokugwinya, siphuze nganoma yiluphi uketshezi olunoshukela (ungasebenzisi iziphuzo ezinama-sweeteners kulokhu). Uma ungekho i-Reflectx yokugwinya, donsa ushukela omncane ngaphansi kolimi.
Khumbula: nganoma yiluphi uhlobo lukashukela onesifo sikashukela, i-insulin ayivunyelwe ngaphandle kwemvume kadokotela.
Ngemuva kokulaliswa esibhedlela sisesimweni sokuwohloka kwesifo sikashukela, inhloso enkulu yabodokotela ukuguqula izinga le-glucose egazini kanye nemetabolism yomzimba wonke. Ukwelashwa kwenzeka ngaphansi kokuqashwa okuqinile kwezokwelapha futhi kuqukethe izigaba eziningana. Okokuqala, isiguli sinikezwa i-insulin (uma kwenzeka kwenzeka i-hypoglycemia, i-glucose kufanele iphathwe). Okulandelayo, ukwelashwa kwe-infusion kwenziwa ngezixazululo ezikhethekile zokubuyisela ibhalansi yamanzi, ukwakheka kwe-electrolyte kanye nokwenza ijwayele i-acidity acid. Ngemuva kwezinsuku eziningana zokwelashwa, isiguli sidluliselwa eMnyangweni we-endocrinology futhi sigcinwe esibhedlela kuze kube yilapho isimo sizinza.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi usizo lokuqala olufika ngesikhathi kanye nokwelashwa okunekhono kuzosiza ekugwemeni imiphumela emibi yesifo sikashukela: ukukhubazeka, i-edema yamakhemikhali, ukushaya kwenhliziyo, unhlangothi, i-sepsis, ukuqina noma ukufa.
Isifo sikashukela esidabukisayo yisimo esibi sesifo sikashukela. Ngakho-ke, abanesifo sikashukela kufanele bakhumbule ukuthi ukuzivivinya okuqinile kuphela, ukulawula isisindo, ukunamathela emithethweni yokudla okunempilo, ukuvivinya umzimba njalo nokwenqaba umuthi wokwelapha kuzosiza impilo egcwele nokugwema ukuvela kwesimo esiyingozi.
Ametov A., Kasatkina E., Franz M. nabanye. Ungakufunda kanjani ukuhlala nesifo sikashukela. IMoscow, i-Interpraks Publishing House, 1991, amakhasi ayi-112, ukusakazwa okwengeziwe kwamakhophi angama-200,000.
UZholondz M.Ya. Ukuqonda okusha kwesifo sikashukela. ISt. Petersburg, ukushicilela indlu "Doe", amakhasi 1997,172. Ukushicilelwa kwencwadi efanayo enesihloko esithi "Isifo Sikashukela. Ukuqonda okusha. ” I-SPb., Indlu Yokushicilela "Konke", 1999., amakhasi 224, ukusatshalaliswa kwamakhophi ayi-15,000.
Ivanova, V. izifo ze-thyroid kanye nesifo sikashukela / V. Ivanova. - M: Umhlaba wamaphephandaba "Syllable", 2012. - 487 k.
Izinhlobo ze-Diabetesic Coma
Isifo sikashukela esinesifo sikashukela sibonisa ngokuthuthuka okusheshayo, kepha okuhleliwe. Izimpawu zokuqala zokuthi umuntu uzokwehlelwa ubuthongo maduze zingabonakala ngosuku noma ngaphezulu. Uma ubona noma yiziphi izimpawu zesimo sokufenda, zama ukubonana nodokotela wakho ngaso leso sikhathi. I-Hyperglycemia ibonakala ngokwanda okusheshayo kokuhlushwa ushukela kaningana.I-ketoacidotic coma ingaqashelwa isicanucanu nokuhlanza, ukukhathala, ukuchama kaningi, izinhlungu esiswini nokuqina. Futhi, isiguli sinephunga elibi elingathandeki le-acetone ephuma emlonyeni. Angakhononda ngokoma, ukukhothama kaningi, ukulahleka kwemizwa.
Ukwelashwa kwe-lactic acidemic coma kuqukethe ukufeza izinyathelo ezifanayo ne-ketoacidotic. Kodwa-ke, kulokhu, ukubuyiselwa kwemali esele ye-acid kubaluleke kakhulu ngokwelashwa. Umuntu esibhedlela ujojwa ngenani elithile le-glucose ne-insulin, lapho izimpawu ezibalulekile zibuyela kokujwayelekile, ukwelashwa okunezimpawu kwenziwa.
Ukunakekelwa okuphuthumayo kwe-ketoacidotic coma, izimpawu nezimbangela ze-ketoacidotic coma yesifo sikashukela
Iziciokwandisa isidingo se-insulin futhi okufaka isandla ekwakhiweni komdlavuza we-ketoacidotic imvamisa:
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela sekwephuzile
Ukwelashwa okungafundile (umthamo womuthi, ukumiselela, njll.).
Ukungazwisisi kwemithetho yokuzithiba (ukuphuza utshwala, ukuphazamiseka kokudla kanye nezindlela zokusebenza komzimba, njll.).
Ukulimala ngokomzimba / ngokwengqondo.
Isifo se-Vascular form.
Ukuzalwa kwengane / ukukhulelwa.
I-ketoacidotic coma - izimpawu
Izimpawu zokuqala iba:
Ukomela, ubuthakathaka obujwayelekile.
Ukumunca i-acetone ephuma emlonyeni.
Ubuhlungu besisu esibuhlungu.
Unomsindo, ukuphefumula okujulile.
Kube sekufika inhibition, ukwazi ukungasebenzi kahle bese uwe owela.
I-ketoacidotic coma - usizo lokuqala
Okokuqala kufanele ibize i-ambulensi futhi ihlole yonke imisebenzi ebalulekile yesiguli - Ukuphefumula, ukucindezela, ukuzindla, ukwazi. Umsebenzi omkhulu ukuxhasa ukushaya kwenhliziyo nokuphefumula kuze kufike i-ambulensi.
Ukuhlola ukuthi umuntu uyazi yini, ungakwenza ngendlela elula: umbuze noma yimuphi umbuzo, amshaye kancane izihlathi futhi ahlikihle izindlebe zezindlebe zakhe. Uma kungekho ukusabela, umuntu usengozini enkulu. Ngakho-ke, ukubambezeleka ekubizeni i-ambulensi akunakwenzeka.
Imithetho ejwayelekile yosizo lokuqala lwe-coma sikashukela, uma uhlobo lwayo lungachazwanga
Into yokuqala okufanele yenziwe yizihlobo zesiguli ngokuqala futhi, ikakhulukazi, izimpawu ezibucayi shayela i-ambulensi ngokushesha . Iziguli ezinesifo sikashukela nemindeni yazo zivame ukujwayelana nalezi zimpawu. Uma kungenzeki ukuthi uye kudokotela, khona-ke kuzimpawu zokuqala kufanele:
Intramuscularly injulin insulin - amayunithi ayi-6-12. (uyazikhethela).
Khulisa umthamo ngakusasa ekuseni - amayunithi ama-4 ukuya ku-2 / ngesikhathi, imijovo engu-2-3 phakathi nosuku.
Ukudla ama-carbohydrate kufanele kuhambisane., amafutha - khipha.
Khulisa inani lezithelo / imifino.
Sebenzisa amanzi amaminerali we-alkaline. Ukungabikho kwabo - amanzi ngesipuni esincibilikisiwe sokuphuza i-soda.
I-Enema nesixazululo sikasawoti - ukwazi ukungadideki.
Izihlobo zesiguli kufanele zifunde ngokucophelela izici zesifo, ukwelashwa kwesifo sikashukela, isifo sikashukela kanye nosizo lokuqala olufika ngesikhathi - yilapho kuphela usizo lokuqala oluphuthumayo luzosebenza.